မိတ်ကပ်ပါရမီထူးခြားပြောင်မြောက်လွန်းပြီး သူမတူတဲ့စွမ်းရည်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ …. | CosmeticMyanmar
Home » Article » မိတ်ကပ်ပါရမီထူးခြားပြောင်မြောက်လွန်းပြီး သူမတူတဲ့စွမ်းရည်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ….
မိတ်ကပ်ပါရမီထူးခြားပြောင်မြောက်လွန်းပြီး သူမတူတဲ့စွမ်းရည်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ….
မိတ်ကပ်ပညာတွေတအားဟော့ဖြစ်လာတဲ့ခေတ်ကာလကြီးမှာ အလှအပအတွက်သာ မိတ်ကပ်ပညာကိုအသုံးမပြုကြတော့ဘဲ ထူးခြားအံ့အားသင့်ဖွယ်မိတ်ကပ် Look များနဲ့ Body Painting အတွက်ပါမိတ်ကပ်ပညာကို ကောင်းကောင်းအသုံးချလာကြပါတယ်။ လူတိုင်းလိုလိုကလည်း မိတ်ကပ်ပညာရဲ့ဆန်းကြယ်မှုတွေကို စောင့်မျှော်ရှုစားလာကြပြီး အံ့သြဖွယ်ရာမိတ်ကပ် Look တွေနဲ့အတူပျော်ဝင်စီးမျောလာကြပါပြီ။ အံ့အားသင့်ဖွယ်မိတ်ကပ် Look တွေနဲ့ Body Painting တွေကိုဖန်တီးပုံဖော်တဲ့နေရာမှာတော့ Argenis Pinal ဟာသူမတူဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေမှာ နာမည်ကြီးနေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Temecula နဲ့ Califonia ကိုအခြေခံပြီး Super Heros ပုံစံတွေကိုအဝတ်အစားမလိုအပ်အောင် Body Painting တွေနဲ့ပါပုံဖော်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေဟာ ဖန်တီးခံရသူရဲ့အသွင်အပြင်တစ်ခုလုံးကို လုံးဝပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တာကြောင့် Facebook နဲ့ Instagram မှာစိတ်ဝင်စားမှုခံနေရတဲ့ မိတ်ကပ်ပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ Argenis Pinal ဟာအသက်(၁၃)နှစ်အရွယ်ကတည်းက မိတ်ကပ်ပညာကိုစတင်လုပ်ဆောင်ဖို့ စိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီး အသက်(၁၉)နှစ်အရွယ်ကစလို့ Freelance အနေနဲ့မိတ်ကပ်လောကမှာ စတင်အခြေချခဲ့ပါတယ်။ Lines , Shades , color အသုံးပြုပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖန်တီးတီထွင်မှုတွေကို Argenis ဟာအလွယ်ကူတတ်မြောက်လောက်အောင် မိတ်ကပ်ပညာပါရမီထူးခြားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ Argenis ဟာသူ့ရဲ့မိတ်ကပ်ပညာစွမ်းရည်တိုးတက်စေဖို့အတွက် Workshops တွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီး Hollywood Makeup Labs ဖြစ်တဲ့ STX Training ကိုတော့ မတ်လ(၁၀)ရက်၂၀၁၅ခုနှစ်မှာပြီးစီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Thanks for the Love on my last Eye Picture I will be doing more like that 😌🙏😘… . . 1. @makeupforeverofficial Flash Color Silver was perfect for added shine effect 2. @mehronmakeup Paradise AQ White, Storm Cloud , Black 3. @ttd_eye in Crystal . . #robot #mehron #mehronpaint #lagirlcosmetics #futuristic #art #artistsoninstagram #artwork #artist #artporn @artistic_unity_ #artistic_share #artistic_unity_ #artistic_nation #artistic_share #artistic #artisticmakeup @arts.hub @art @art_spotlight @artselect #editorial #editorialphotography #canon70d #canon24105mm #wakeupandmakeup #hudabeauty @art_motive
A post shared by Argenis Pinal (@argenis.pinal) on Feb 2, 2018 at 9:19am PST
Argenis ဟာ Hair Cutting , Color , Mens Grooming , Hair Styling တွေပါပါဝင်တဲ့ Title of Makeup Specialist ကိုလည်း Paul Mitchell The School မှာဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Facebook နဲ့ Instagram တွေမှာတင်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ဖန်တီးတီထွင်မှုတွေကို အကဲခတ်ကြည့်ရုံနဲ့ သူ့ရဲ့အရည်အချင်းတွေကို အပြည့်အဝတွေ့မြင်နိုင်မှာပါ။ ဒီလိုပါရမီထူးခြားပြီး တီထွင်ဆန်းသစ်မှုပြောင်မြောက်လွန်းလှတဲ့ Argenis ရဲ့သူမတူစွမ်းရည်တွေဟာ သူကြိုက်နှစ်သက်စွာရေးဆွဲနေတဲ့ Zoombie Wolverine , Cyborg Supermans , Superheros တွေလိုဖြစ်လာဦးမလားဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော်။
Here is the time lapse of this ❄ Icy thing❄ . . 1. @makeupgeekcosmetics Concrete, Corrupt 2. @mehronmakeup White AQ Paint . . #art🎨 #artist #arts #abstract #frost #art #painting #painter #paintings #makeupgeekcosmetics #9gagnoticeme #9gag @9gag #wakeupandmakeup @tutorials.gallery @tutorialesvideos @arts.hub @artselect @artistic_unity_ @art_motive @artshelp @art_spotlight @worldofartists @diyfurious @instagram @fashionvideo.s @tutorial.now #instagram @wakeupandmakeup #makeupforever #tutorial #tutorials #tutorialmakeup #tutorialesvideos
A post shared by Argenis Pinal (@argenis.pinal) on Dec 5, 2017 at 1:40pm PST
Image Source : www.facebook.com/argenispinal , www.instagram.com/argenis.pinal
Nude Color လက်သည်းနီလေးတွေသုံးပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ လက်သည်းလေးတွေရရှိနိုင်စေဖို့ 😍............
အသားအရေလေးချောမွတ်ပြီး မိတ်ကပ်လှအောင်ညှိပေးနိုင်တဲ့ SON&PARK ရဲ့ Beauty Water..........